သရုပ်ဆောင် မနွယ်နီ သတင်းကြားကြားခြင်း အလှူငွေကျပ် 6သိန်းနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေတို့အဖွဲ့
သရုပ်ဆောင် မနွယ်နီ သတင်းကြားကြားခြင်း အလှူငွေကျပ် 6သိန်းနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေတို့အဖွဲ့ ဟိုတစ်နေ့ညက MC သတင်း Page မှာ ဇာတ်ပို့ အလွှာမှ သရုပ်ဆောင် မနွယ်နီ သတင်းလေးကိုကြည့်ပြီး အနုပညာ သမား အချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာမိလို့ ဒီနေ့မနက်မှာ …သူ့အခက်အခဲ ….သူ့ကျန်းမာရေး ….သူ့ သားသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝအားလုံး […]
လေတစ်ခြမ်းဖြန်းသွားတဲ့…. လူရွှင်တော်… ဦးပေါ်လေး လေတစ်ခြမ်းဖြန်းသွားတဲ့ လူရွှင်တော် ဦးပေါ်လေးဆီသို့ လူရွှင်တော် ကောင်းကျော်က သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လိုအပ်တာသုံးဖို့အတွက် လူရွှင်တော်အသင်းကိုယ်စား ကူညီခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လူရွှင်တော်အသင်း(ရန်ကုန်)ရဲ့ နာယကကြီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးပေါ်လေးဟာ ဘယ်ဘက်တစ်ခြမ်း လေဖြန်းသွားလို့ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မေလ(၁၂) ရက်နေ့က […]
ဒဏ်ရာကိုခွဲစိတ်ဖို့အတွက် ဘန်ကောက်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကျော်မင်းဦး
ဒဏ်ရာကိုခွဲစိတ်ဖို့အတွက် ဘန်ကောက်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကျော်မင်းဦး ၂၀၁၄ အာရှယူ19ပြိုင်ပွဲကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းကျော် ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာကတော့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ကျော်မင်းဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့မြန်မာယူ၁၉အသင်း အတွက် တစ်ချိန်က အားကိုးခဲ့ရတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကွင်း လယ်ကစားသမား တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တိုက်စစ်ထိ ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ်ကစား သမားဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် […]
ချစ်သူနဲ့ …အဆင့်ကျော်ပြီး… လေးနှစ်လုံး …တူတူနေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်….းပြောပြတဲ့ အေသင်ချိူဆွေ.. ပ ရိ သတ်ေ တွ လက်ခံအားပေးထားတဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေကတော့ လက်ရှိချိန်မှာ အချစ်ရေးမှာကံအကြောင်းမလှခဲ့တာကြောင့် Single Mother တယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေသင်ချိုဆွေကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ Single Mother တွေကိုလည်း […]
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Grade-3 ၊ Grade-6 သင်တန်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းဖြစ်နေသလား? အခုတစ်လော ပညာရေးဌာနမှာ Grade-3 . Grade-6 သင်တန်းတက်ရောက်ရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမတွေဟာ များလာနေပါတယ်… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ ရာသီဥတု အပူဒဏ်ကို အံတုပြီး သင်တန်းတက်နေကြရတာ ဒီနေရာမှာ ရောဂါအခံရှိသောဆရာဆရာမများ၊ အသက်ကြီးသောဆရာဆရာမများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆရာမများ […]
“ဗိုက်ခေါက်ထူပြီး ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်နေသူတွေ အတွက် သတင်းကောင်းနော်”
ရှောက်ရွက်ဟာ ဗိုက်ခေါက်က အဆီတွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိ်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ တို့စရာအဖြစ်သာ စားသုံးကြတဲ့ ရှောက်ရွက်ကို သဘာဝရဲ့ အစွမ်းနဲ့ အဆီကျတဲ့နေရာမှာပါ သုံးကြည့်ခြင်းဟာ ထူးခြားတဲ့ ရလာဒ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ပြုလုပ်ပုံကတော့ အလွန် လွယ်ကူလှပါတယ်။ ရှောက်ရွက်အကြမ်းနဲ့ သကြားပဲ လိုတာပါ။ လိုအပ်တဲ့ […]
ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် ယောကျာ်းမျိုးနဲ့တွေ့မှ သင့် single ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ
ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် ယောကျာ်းမျိုးနဲ့တွေ့မှ သင့် single ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ သင်ကိုနှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ချစ်ပေးနိုင်မယ့်ယောက်ျားမျိုးနဲ့မဆုံမချင်းsingleအဖြစ်နေပါ။တစ်ယောက်တည်းပဲဘ၀ကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပဲဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။ ဒီလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့ မတွေ့မချင်းပေါ့နော်။ ၁ ။သင့်လက်ကို တွဲပြီးသင်ကို officialတွဲပြနိုင်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို မတွေ့မချင်း Singleအဖြစ်နေလိုက်ပါ။ ၂။ ညသန်းခေါင်မှာ သင်ကို“ချစ်တယ်”ဆိုပြီး ပြောဖို့အတွက် သင့်အိမ်ရှေ့ကို ရောက်လာတတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးကို မတွေ့မချင်း […]
ပင်လယ်ထဲကျသွားတဲ့ဖုန်းကို… ပြန်ကောက်ပေးတဲ့… ဝေလငါးလိမ္မာလေး အြ ဖူေ ရာင်ဝေလငါးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Beluga Whale တွေကို သမုဒ္ဒရာထဲမှာ မြင်တွေ့ရတာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင်က နော်ဝေငါးဖမ်းသမားတွေကတော့ သာမာန်ထက်ပိုပြီး ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ကြုံခဲ့ရပြီး အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ တို့ ရဲ့သေ င်္ဘာအနားကို […]
နောက်ဘီးမကျရင် ကျွန်တော်တို့ ဧရာဝတီဖြစ်ထဲမှာသွားဆင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ လေယာဉ်မှူးကြီး ဦးမြတ်မိုးအောင်
နောက်ဘီးမကျရင် ကျွန်တော်တို့ ဧရာဝတီဖြစ်ထဲမှာသွားဆင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ လေယာဉ်မှူးကြီး ဦးမြတ်မိုးအောင် ‘‘ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဆိုတော့ အဓိက ဘီး(နောက်ဘီး)ကျလို့ ဆင်းတာပါ။ မကျရင် ကျွန်တော်တို့ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ သွားဆင်းရလိမ့်မယ်’’ လေယာဉ်မှူးကြီး ဦးမြတ်မိုးအောင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း…………..! Byမြင့်ကျော်လှိုင်On လေယာဉ်မှူး ဦးမြတ်မိုးအောင် မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်း လိုင်းပိုင် လေယာဉ်အမှတ် XY- AGQ, Embraer 190 […]